Kedu ihe bụ biosphere? Kedu njirimara o nwere? Chọpụta ebe a | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyi bu uzo di mgbagwoju anya nke nwere otutu nde mmekorita nke ihe di ndu na ihe ndi okike. Ọ dị mgbagwoju anya ma saa mbara na ọ gaghị ekwe omume ịmụ mbara ụwa dịka otu dum. Iji kewaa usoro dị iche iche nke mejupụtara ụwa, usoro ụzọ anọ akọwapụtara. Biosphere, geosphere, hydrosphere na ikuku.
Geosphere na-anakọta akụkụ nke ụwa na siri ike nke ebe akwa nke Uwa nke ayi bi n’ime ya ka achotara ma okwute tolite. Geosphere nwere otutu oyi akwa.
Igwe elu nke ụwa, nke na-adịkarị n'etiti 500 na 1.000 mita, nke mejupụtara ala na nkume nkume sedimentary.
Usoro nke etiti kwekọrọ na kọntinent kọntinenti ebe a na-achọta mbara ala, ndagwurugwu na usoro ugwu.
Okpuru ala basalt di n’ime ya nke achoputara n’ime ya bu oke ibu ihe dika 10-20km.
Uwe elu ụwa.
Maka ozi ndị ọzọ na akwa ụwa pịa njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Ikuku bụ akụkụ gas dị na gburugburu ụwa. Ihe mejuputara ya bu nitrogen (78%), oxygen (21%), na gas ndi ozo (1%). Ọ bụ mpaghara ebe igwe ojii na ọdịda na-etolite, yana mkpa ya bụ na na-eme ka o kwe ụwa anyị obibi.
Hydrosphere bu akuku nke uwa ji mmiri mmiri mmiri. Akụkụ mmiri mmiri bụ oke osimiri, oke osimiri, ọdọ mmiri, osimiri, mkpọda ugwu, wdg. Akụkụ siri ike bụ okpu pola, glaciers na ice ice.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro nke ọ bụla nke ụwa nwere ihe dị iche iche ma nwee ọrụ bu isi maka ndụ na mbara ala. Ma nke anyị ga-elekwasị anya na ya n’isiokwu a bụ biosphere. Kedu ihe bụ biosphere?
Na biosphere bu dum gas, siri ike na mmiri mmiri nke elu uwa nke ihe di ndu biri. Emebere ha site na mpaghara lithosphere na mpaghara hydrosphere na ikuku ebe enwere ike ndụ.
1 Njirimara nke Biosphere
2 Etoju nhazi na Biosphere
2.1 Ọnụ ọgụgụ
2.2 Obodo ndu
2.3 Gburugburu ụwa
Njirimara nke Biosphere
Ugbu a ị matara ihe biosphere bụ, ka anyị hụ ihe njiri mara ya. Na biosphere mejupụtara obere mkpa nke adịghị agbanwe agbanwe. Ebe obu sistemu na-achikota mpaghara nke uwa ebe ndu di ọ na-esiri anyị ike ịkọwa oke ebe biosphere bidoro na njedebe. Mana karie ma ọ bụ ihe na-erughị, biosphere gbatịrị banyere 10 km n'elu oké osimiri na banyere 10 mita n'okpuru ala larịị ebe mgbọrọgwụ nke osisi na osisi banye na microorganisms dị.
N'akụkụ mmiri, ọ gụnyekwara mpaghara nke mmiri mmiri na ogbu mmiri nke oke osimiri ebe ndụ dị. N'èzí ebe a na-ahụ maka mbara igwe na njedebe nke anyị nwere ọtụtụ ma ọ bụ obere iwu, enweghị ndụ terrestrial.
Dị ka anyị kwuru, ndụ na biosphere apụtaghị dị ka a na-aga n'ihu oyi akwa nke ụmụ anụmanụ, osisi na microorganisms (nje na nje virus), kama kama ndị mmadụ nke dị iche iche ụdị. Speciesdị ndị a (ruo ugbu a, e nwere ihe karịrị nde abụọ amaara ama) na-ekesa ma biri n'ókèala dị iche iche. Fọdụ na-akwaga, ndị ọzọ na-emeri na ndị ọzọ na-achịkwa ma na-agbachitere ebe obibi ha.
Biosphere bụ ihe atụ nke usoro. Anyị na-akọwapụta usoro dị ka ihe akụrụngwa ndị na-emekọrịta ihe na ibe ha, yana ndị ọrụ mpụga, n'ụzọ ha ga-eme dị ka set nke na-ejigide arụmọrụ n'etiti. Ọ bụ ya mere e ji kọwaa biosphere n’ụzọ zuru oke dị ka sistemụ ebe ọ bụ na ha nwere otu ụdị ụdị nke ha na-emekọrịta ihe, ma n’aka nke ya, na-emekọrịta ihe ndị ọzọ na-abụghị nke biosphere, kama ọ bụ nke geosphere, ikuku na hydrosphere. .
Iji gosipụta na anyị na-echigharị n’ihe ndị dị n’elu ala, mmiri, ikuku. Azụ na - ebi na hydrosphere, mana n’aka nke ọzọ, na biosphere, ebe ọ bụ na ọ na - emetuta mmiri mmiri ma na - ebi mpaghara ebe ndụ dị. Otu ihe ahụ bụ maka nnụnụ. Ha na-efefe n’elu ikuku dị ala nke ụwa a na-akpọ ikuku, ma ha na-ebikwa na ndụ nke ihe ndị dị na mbara igwe.
Yabụ, na biosphere enwere biotic ihe ndị ahụ nọchiri anya mpaghara ndị ahụ niile dị ndụ na-emekọrịta ihe na ibe ha na sistemu ụwa ndị ọzọ. Obodo ndị ahụ dị ndụ mejupụtara ndị na-emepụta ihe, ndị na-eri ihe na ndị na-emebi emebi. Ma enwere kwa ihe abiotic ndị ahụ na ndị dị ndụ na-emekọ ihe. Ihe ndị ahụ bụ oxygen, mmiri, okpomọkụ, ìhè anyanwụ, wdg. Ntọala nke ihe ndị a, biotic na abiotic, mejupụtara gburugburu ebe obibi.
Etoju nhazi na Biosphere
Na biosphere, n'ozuzu, ihe ndị dị ndụ anaghị ebi iche, kama ọ dị mkpa ka ha na ndị ọzọ dị ndụ na ihe ndị na-eme ka ha na-emekọ ihe. Ọ bụ ya mere, na eke e nwere ọkwa dị iche iche nke nhazi. Dabere na mkparịta ụka nke ndị dị ndụ na otu nnukwu otu dị, e nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ, obodo na usoro okike.
Ọkwa nke nhazi a na-apụta ihe mgbe ọdịdị nke otu ụdị osisi, anụmanụ ma ọ bụ microorganisms jikọtara n'otu oge na oghere. Nke ahụ bụ, ụdị osisi na anụmanụ dị iche iche ibikọ n'otu oghere ha na-ejikwa otu akụ ahụ iji dịrị ndụ na ịba ụba.
Mgbe ị na-ekwu maka ọnụ ọgụgụ mmadụ, ebe a hụrụ ụdị ahụ na oge nke ọnụ ọgụgụ ahụ ga-ekpebisi ike, ebe ọ bụ na ọ gaghị adịgide adịgide n'oge n'ihi ihe ndị dịka enweghị nri, asọmpi ma ọ bụ mgbanwe na gburugburu ebe obibi. Taa, site n'omume nke mmadu, otutu mmadu adighi adi ndu n'ihi na ihe ndi ozo di na gburugburu ebe ha bi bu ihe ojoo ma obu mebie.
Obodo ndu bu ebe mmadu abuo ma obu kariri nke ihe di ndu na-ebi. Nke ahụ bụ, ọnụọgụ ọ bụla na mmekọrịta ndị ọzọ na gburugburu ha gbara gburugburu. Ndi obodo a noo n’ile gunyere ndi nile na - aru ​​aru. Dịka ọmụmaatụ, oke ọhịa, ọdọ mmiri, wdg. Ha bu ihe omuma atu nke obodo ndi nwere ndu, ebe onwere otutu onu ogugu, amphibians, reptiles, algae na microorganisms sedimentary ndi na emekorita onwe ha, na aka ha, ha na ihe ndi ozo di ka mmiri (na iku ume), oke ọkụ na-akụ ọdọ mmiri ahụ na sedimenti ahụ.
Ihe ndi ozo bu usoro kachasi ukwuu na nhazi. N'ime ya, obodo ndị na-ahụ maka ndụ na-enwe mmekọrịta na gburugburu ebe obibi iji mepụta usoro ziri ezi. Anyị kọwapụtara usoro okike dị ka nke ahụ nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee mmekọrịta dị egwu. Ndi mmadu di iche iche na ndi mmadu bi na ndu na-adabere na ibe ha na ihe ndi ozo. Dịka ọmụmaatụ, amphibians chọrọ ka ụmụ ahụhụ na-eri nri, mana ha chọkwara mmiri na ọkụ iji dịrị ndụ.
Mmekọrịta dị n'etiti ebe obibi na ebe obibi na-adị n'ọtụtụ oge na okike. Mgbe osisi photosynthesize, ha agbanweta gas na ikuku. Mgbe anụmanụ na-eku ume, mgbe ọ na-eri nri ma wepụzie ihe mkpofu ya, wdg. Mmekọrịta a nke gburugburu ebe obibi na ebe obibi na-agbanwe ka ịgbanwee ike n’etiti ndị dị ndụ na gburugburu ha.
N'ihi mgbagwoju anya nke mmekorita, ndabere nke ụdị a na arụmọrụ ha mezuru, mgbakwunye nke usoro okike bụ siri nnọọ ike ịtọlite. Ebumnuche nke usoro obibi abụghị otu, anaghị arụ ọrụ na-arụ ọrụ mana ọ nwere ọtụtụ obere nkeji nwere mmekọrịta ha na arụmọrụ ha.
Na ihe ndi ozo, enwere echiche abuo nke nwere ezigbo mmekorita ebe umu ihe na-adabere na ha. Nke mbụ bụ Ebe obibi. Ebe obibi bụ ebe ahụ organism bi ma tolite. Ebe obibi ahụ bụ nke mpaghara anụ ahụ dị ndụ ebe ihe dị ndụ na-ebi na ihe ndị dị ndụ ebe ọ na-emekọrịta ihe. Ebe obibi nwere ike ibu ibu dịka ọdọ mmiri ma ọ bụ obere dika anthill.
Echiche nke ozo gbasara usoro okike bu gburugburu ebe obibi. Nke a na - akọwa ọrụ ihe dị n’ahụ na - arụ na mbara igwe. Ndị ọzọ okwu, ụzọ nke organism metụtara biotic na abiotic ihe. Ha nwere ike ịbụ ihe dị ndụ, heverotrophic organism, scavengers, decomposers, wdg. Enwere ike ịsị na ebe obibi gburugburu ebe obibi bụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke ihe dị ndụ na-enwe n'ime usoro okike nke ibi n'ime ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, biosphere bụ usoro dị mgbagwoju anya nke enwere ọtụtụ mmekọrịta nke na-eme ka ndụ dị na mbara ala. Odi nkpa ka ewepu usoro ndu mmetọ na mbibi maka omume anyị iji nwee ike ijigide mmekọrịta niile nke ndị dị ndụ. Ngwurugwu obula na gburugburu ebe obibi na aru oru nke ya na oru a bu ihe na eme ka anyi nwee ike ibi ndu di nma. Ọ bụ ya mere o ji dị ezigbo mkpa ichebe ma na-echekwa usoro ndụ anyị nke ọma ka anyị nwee ike ịnọgide na-ebi ezigbo ndụ ogo ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ biosphere?
Zaghachi BRENDA TREBEJO RODRIGUEZ
Nwabueze Nwachukwu dijo
ọ nyeere m ezigbo aka
Zaghachi lizeth rojas
Daalụ maka ozi ahụ, ọ nyeere m aka nke ukwuu.
Arctic wim tebea te sɛ polar po so ahyɛn gyinabea